Ogaden News Agency (ONA) – Dagaaladii Ugu Dambeeyay Ee Kadhacay Ogadenia + Khasaaraha Cadawga.
Dagaaladii Ugu Dambeeyay Ee Kadhacay Ogadenia + Khasaaraha Cadawga.
Wararka naga soo gaadhaya jiida hore ee dagaalada Ogadenia ayaa kawar bixinaya laba dagaal oo ay Ciidanka Wadaniga Xoraynta Ogadenia la beegsadeen fadhiisimo ay ciidanka wayaanuhu kulahaayeen duleedka dagmada Dhagaxmadoow ee Gobolka Jarar.
Dagaaladan oo ahaa kuwo ay Naftood Hurayaasha JWXO qorsheeyeen ayaa ciidanka gumaysiga Itoobiya lagaga dilay askar iyo saraakiil ciidankooda kamid ah waxaana ciidanka xooga dalka Ogadenia u suura galay in ay fadhiisinkii ciidanka cadawga gacanta kudhigaan.
Warkan ayaa tibaaxaya in markay taariikhdu ahayd 27/6/16 deegaanka lagu magacaabo Dhibca oo Dagmada Dhagaxmadow ee Gobolka Jarar katirsan dagaal Ciidanka Wadaniga Xoraynta Ogadenia CWXO iyo kuwa gumaysiga Itoobiya ku dhexmaray, waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 5 askari 4 kalana waa lagaga dhaawacay.
Waxaa kaloo uu warku intaas raacinayaa in 28/6/16 Isla Tuulada Dhibca dagaal markale CWXO iyo kuwa Wayaanaha kudhexmaray ciidanka gumaysiga lagaga dilay 2 askari 4 kalana waa lagaga dhaawacay.